Truth or Dare ဂိမ်းလေးက ယူတို့စုံတွဲတွေကို ပိုပြီးသံယောဇဉ်တွယ်သွားစေမယ်ဆိုတာယုံ…❤️ – Trend.com.mm
Truth or Dare ဂိမ်းလေးက ယူတို့စုံတွဲတွေကို ပိုပြီးသံယောဇဉ်တွယ်သွားစေမယ်ဆိုတာယုံ…❤️
Posted on August 1, 2018 August 1, 2018 by Noel
ဂိမ်းတွေထဲမှာ Truth or Dare ဂိမ်းလောက် စုံတွဲတွေကိုပိုပြီးရင်းနှီးမှုရှိစေတာ၊ပျော်စရာကောင်းစေတာမရှိပါဘူးတဲ့။Truth or Dare ဂိမ်းဆိုလို့လန့်မသွားနဲ့နော်။စုံတွဲတွေကြားထဲမှာ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိလာစေဖို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမေးခွန်းလေးတွေမေးကြည့်ရုံပါပဲ။အမှန်အတိုင်းမဖြေပဲ Dare ဆိုရင်တော့ ယူတို့ရဲ့ချစ်သူ နောက်ထပ် မ Dare ရဲအောင် နည်းနည်းပါးပါး စိတ်ကောက်လိုက်ပေါ့ 🤭 တစ်ခါတစ်လေကျစကားတွေအများကြီးပြောနေတာထက် ဒီလိုဂိမ်းလေးဆော့တာက သူ့စိတ်ကိုလည်း ပိုပြီးသိလာစေသလို ကိုယ့်ရဲ့တကယ်စိတ်ရင်းမှန်ကိုလည်းမသိမသာ
ဖွင့်ပြသွားနိုင်တဲ့ဂိမ်းလေးပါ။စုံတွဲတွေတင်မက သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးကစားလို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ခရက်ရ်ှလေးနဲ့ကစားလို့လည်းရပါတယ်နော်။ကဲ ဒါဖြင့် ဘယ်လိုမေးခွန်းလေးတွေမေးကြမလဲ။တစ်ချို့က ဆော့မယ်ဆိုပြီး ဘာမေးရမလဲသေချာမသိကြတာတွေရှိပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီဂိမ်းလေးဘယ်လိုဆော့ရတယ်ဆိုတာရော သေချာသိရဲ့လား။ကိုယ်က Truth or Dare ဆိုပြီးသူ့ကိုရွေးခိုင်းလိုက်ပါ။Truth ဆိုရင်မေးခွန်းလေးတွေဖြေပေါ့။Dare ဆိုရင်တော့ အဲ့ထဲကတစ်ခုရွေးပြီးလုပ်ခိုင်းလိုက်ရုံပါပဲ 🤭
၁)အ၀တ်အစားကို နှစ်ရက်ဆက်တိုက်၊သုံးရက်ဆက်တိုက် ဆက်ဝတ်ဖူးလား?
၂)ရခဲ့ဖူးတဲ့ နောင်တကြီးကြီးမားမားက ဘာလဲ?
၇)ဘ၀မှာ တစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ?
၈)ဖုန်းရဲ့ Search list မှာနောက်ဆုံးရှာခဲ့တာက ဘာလဲ?
၉)အများသုံးသန့်စင်ခန်းထဲရောက်နေပြီး Toilet paper လည်းမရှိဘူးဆို ဘာလုပ်မလဲ?
ဒါလေးတွေကတော့ Truth မေးခွန်းလေးတွေပေ့ါ။သူက Truth ကိုရွေးရင် အဲ့ဒါလေးတွေမေးနော်။တွဲခဲ့သမျှရည်းစားထဲ ဘယ်ရည်းစားကိုအချစ်ဆုံးလဲဆိုတာမျိုးတော့ မမေးသင့်ပါနော် 😜😅 တစ်ခြားကိုယ်သိချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း ထည့်မေးကြပေါ့ အယ့်လဲ့ 😎
အခု Dare မေးခွန်းလေးတွေလာပါပြီ
၁)မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဖုန်း Contact lists ကိုဆွဲချလိုက်ပါ။ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုထောက်လိုက်ပါ။ကျလာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပိုင်ရှင်ကို “Look behind you” ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါ 😅
၃)ဆားရည်စိမ်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာ သကြား ဒါမှမဟုတ် ချောကလက်ရည်တစ်ခုခုဆမ်းပြီးစားပြပါ 🙄
၄)မြေပဲထောပတ်နဲ့ မျက်ခုံးမွှေးနှစ်ဖက်ကို ခြယ်ပါ
၅)မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီး ချစ်သူက မျက်နှာမှာပန်းချီဆွဲပေးတာသုံးမိနစ်လောက်ခံပါ 🤭
၆)အပြင်ကိုထွက်ပါ။ပြီးရင် တစ်ယောက်ယောက်က မင်းဘာကြည့်နေတာလဲမေးလာတဲ့အထိကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်နေပါ။မေးလာရင်တော့ သူတို့ကို ပန်းကန်ပြားပျံတွေ့ခဲ့လို့လို့ ဖြေလိုက်ပါ 😜
၇)ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ စကားလုံး ၁၀၀၀ပါတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပါ။အကြောင်းရင်းမရှိတဲ့ပိုစ့်မျိုးပေါ့
၉)ချစ်သူနဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဆဲလ်ဖီပုံရိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ပရိုဖိုင်ချိန်းပါ 😅🤭
၁၀)နောက်ထပ်အလှည့်မရောက်ခင်အထိ စကားတစ်လုံးမှမပြောပါနဲ့ 🤫
Park Min Young နဲ့ဒိတ်သတင်းသက်သေတွေအပေါ် တစ်ချက်ချင်းပြန်ရှင်းလိုက်တဲ့ Park Seo Joon
ကမ္ဘာ့ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး လေကြောင်းလိုင်းများ(လေယာဉ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကို ဂွတ်ဘိုင်လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်)